10-ka qaybood ee ugu sarreeya nolosha anime ee lagu daawado Netflix - Cradle View
Leave a Comment 10-ka qaybood ee ugu sarreeya nolosha anime si aad u daawato Netflix
"Slice Of Life" anime waxaa lagu qeexaa inta badan sida sheekooyin iyo xaalado aan caadi ahayn muuqaalkooda hore laakiin macquul ah nolosha dhabta ah. Dadka qaar ayaa dhibaato kala kulma fahamka micnaha tani run ahaantiina ma bixin karno sharaxaad sababtoo ah taasi maaha sababta aad halkan u joogto.
Si kastaba ha ahaatee waanu ka gudbi doonaa (aragtideena) 10ka anime ee ugu sarreeya nooca "Slice Of Life" ee laga heli karo Netflix si loo sii daayo. Marlabaad tani waa ra'yigeena oo kaliya, wax kale maaha, haddii aad ku raaxaysato akhrintan oo ay faa'iido u leedahay, fadlan sii like ama share garee. Waxaan ku soo darnay tixdan taxanaha ah ee la magac-baxay iyo sidoo kale kuwo hoosaadyada sidoo kale.
10. Kaynta Piano (2 xilli, 12 qaybood midkiiba)
Kaynta Piano waxay daba socotaa sheekada soo socota Kai Ichinose, oo ah wiil ku nool degmada iftiinka cas, laakiin wuxuu baxsadaa habeenkii si uu u ciyaaro biyaano gudaha kaynta. Shuhei Amamiya, wiilka fasalka-dugsiga ee pianist-yaqaanka xirfadda leh, waxa uu u wareegay dugsiga hoose ee Moriwaki, dugsiga hoose ee Kai. Kai wuxuu ku koray inuu ciyaaro biyaano duug ah oo lagu tuuray kaynta dhexdeeda, Shuhei aabihiis waa piano-yaqaan caan ah. Kulankooda fursadda ayaa wax ka beddela noloshooda iyo muusigga. Hadda waxaa jira 2 xilli oo kaynta Piano ah oo leh 12 qaybood xilli ciyaareedkii hore iyo 12 kale oo labaad. Waxa kale oo jira Ingiriis, Isbaanish Yurub, Boortaqiis Boortaqiis ah iyo Duubabka maqalka ee Faransiiska iyo sidoo kale maqalka asalka ah ee Jabbaan iyo sharraxaadda maqalka ee Jabbaan.
9. Anohana (1 Xili, 11 Qaybood)
Chichibu, Saitama, koox ka kooban lix-fasalka lixaad ee saaxiibada carruurnimada ayaa kala fogaaday ka dib markii mid iyaga ka mid ah, Meiko "Menma" Honma, uu ku dhintay shil. Shan sano ka dib dhacdada, hogaamiyaha kooxda, Jinta Yadomi, ayaa ka baxday bulshada, ma dhigto dugsiga sare, waxayna ku nooshahay meel ka baxsan. Anohana ayaa la sheegay in ay tahay mid aad u taabato oo shucuur leh, sidaa darteed haddii aadan ku jirin waxaas oo dhan markaas anime-gani waxaa laga yaabaa inuusan adiga kuu ahayn. Hadda waxa jira 1 xilli oo leh 11 qaybood. Nooca Netflix wuxuu leeyahay dub Jarmal iyo Ingiriis ah, iyo sidoo kale asalka Japan.
8. Kakegurui (2 xilli, 12 qaybood midkiiba)
Waxaan horey u soo bandhignay Kakegurui on our 10ka Sare ee Isbaanish ee loo Dubbed Anime ee lagu daawado Netflix boostada laakiin Kakegurui waxay daba socotaa sheekada dugsiga lagu magacaabo Hyakkaou Academy kaas oo udub dhexaad u ah khamaarka iyo ciyaaraha iyo ciyaaraha ardaydu ay tahay inay ka qayb qaataan inta lagu jiro taxanaha. Waxay ku socotaa khadka ku saabsan nooca Slice Of Life. Jilaaga ugu weyn waa Ryota Suzui, ardayad isla akadeemiyada wax ka barata Yumeko Jabami ardayad la mid ah oo si xun u xiiseeya khamaarka, waxay rabta in ay qaadato golaha ardayda oo ay ku garaacdo ciyaar khamaar furan, waxay u baahan doontaa xoogaa kaalmo ah haddii ay ayaa samayn doona tan. Waa anime aad u xawli badan oo xamaasad leh oo leh saami badan marka loo eego abaal-marinaha khamaarka iyo faa'iidooyinka, way u qalantaa wakhtigaaga haddii aanad daawan.
Sheekadu waxay inta badan daba socotaa labadan jilaa iyo guud ahaan jilayaasha kale. Haddii aadan horey u daawan waxaan kugula talineynaa inaad siiso Kakegurui go'aan maadaama ay aad u qabatimo marka aad daawato qeybta koowaad, oo ku habboon daawashada xad dhaafka ah. Hadda waxa jira Ingiriis, Isbaanish Yurub, Faransiis iyo Boortaqiis Boortaqiis ah oo diyaar ah oo la daawado iyo sidoo kale sharraxaadda maqalka ee asalka ah iyo Jabbaan.
7. Beentaada Abriil (1 Xiliga, 22 Qaybood)
Beentaada bisha Abriil
Beentaada bisha Abriil waxay ku saabsan tahay wiil, ka dib markii hooyadii dhimatey la kulmay gabar garaaceysa violin. Wuxuu luminayaa rabitaankiisa inuu u ciyaaro biyaano ka dib dhimashadii hooyadiis. Si kastaba ha ahaatee markii uu la kulmo gabadh violin ah. Waxay noqdaan kuwo jacayl ku lug leh waxayna bilaabaan xiriir taas awgeed. Waa anime nooc aad u macaan waxaana hubaal ah inay ku farxi doonto haddii dareenkaagu hoos u dhaco. Sii bax oo daawo gelinta. Hadda waxa jira dub Ingiriisi, mid Jarmal ah iyo maqal asal ah oo Jabbaan ah. Waxa kale oo jira af-hoosaadyo Polish, Ingiriis, Faransiis iyo Boortaqiis.
6. Maarso sida libaaxa u soo galay
Maarso ayaa u soo galay sidii libaax oo kale
Rei Kiriyama (Ryunosuke Kamiki) waa 17 jir shogi (Japanese Ches) ah. Waxa uu u soo baxay ciyaaryahan shogi ah markii uu ku jiray dugsiga dhexe. Keligiis wuxuu ku nool yahay Tokyo sababtoo ah waalidkiis iyo walaashii ka yar ayaa ku dhintay shil baabuur markii uu yaraa. Maalin maalmaha ka mid ah, Rei Kiriyama wuxuu la kulmay saddex gabdhood oo walaalo ah oo ay deris ahaayeen, waana kulankii ugu horreeyay ee uu qof kasta oo ka baxsan dunida shogi la kulmo sannado badan. Hadda waxaa jira 1 xilli oo laga heli karo Netflix oo leh 22 qaybood. Waxa kale oo jira dub Ingiriisi ah iyo sidoo kale asalka Japan.
5. Cod Aamusan (Filim, 1h 9m)
Dabeecad kasta waxaa lagu sawiray tafatirka iyo dadaalkaas oo kale, waxaad runtii arki kartaa wax badan oo Wok adag ah oo galay soo saarista filimkan. Jilida codku aad ayuu u wanagsanahey mana ka fikiri karin wax dhibaato ah Waa sawir-kartoon sida filimada oo kale laakiin waxa uu leeyahay waqtiyo shucuurtiisa sidoo kale tani waxa ay caawisaa in la dhaqan geliyo cunsur jacayl ee ka mid ah sidoo kale. Sheekadu waxay u dhacday sidan.
Cod Aamusan waa sheeko xiiso badan oo ku saabsan gabar dhagool ah iyo cagajugleyntii hore. Ka dib markii lagu xoogsheegtay dugsiga si fudud oo ah dhagoolo iyo kala duwanaansho, dabeecadda ugu weyn, Shoukou, waxay fool ka fool ula timaaddaa cagajugleyntii hore, Shoya. Heshiisyada qaar ka dib Shoya waxay go'aansatay inay ka dhigto Shoukou oo ay gaadho iyada. Waxa uu dareemaa in uu ka qoomameynayo sida uu ula dhaqmay iyada, sababtaas awgeed waxa uu dareemaya in aanu u qalmin madax furashada laakiin waxa uu weli rabaa in uu wax saxo. Shoya ma loo cafin doonaa falkisa? Oo miyuu awoodi doonaa inuu ka soo kabsado iyada? Waxa aanu kugula talin lahayn in aad bixisid maadaama uu aad u macaan yahay oo filimku aad u dheer yahay, in ka badan 2 saacadood. Haddii aad rabto wax badan oo ku saabsan filimkan waxaad ka heli kartaa maqaalkeena Codka Aamusan halkan. Hadda waxa jira dub Ingiriisi, dub Isbaanish ah iyo maqal asal ah oo Jabbaan ah. Waxa kale oo jira Ingiriis, Isbaanish, Faransiis iyo qoraal-hoosaadyo Brazilian ah.
4. Toradora! (1 Xiliga, 25 Qaybood)
Toradora waxay noqotay doorasho aad loo jecel yahay oo ah nooca jacaylka anime iyadoo dad badani ay u isticmaalayaan taxanahan barta ay ka soo bilaabayaan. Sabab baa jirta. Toradora waxay leedahay sheeko aad u wanaagsan fikradayda, oo leh jilayaal cusub iyo sheeko-hoosaadyo kale ayaa lagu soo daray marka ay sheekadu sii socoto. Sheekadu waxay daba socotaa inta badan koox arday ah oo dugsi ah iyo si aad ugu dhow Taiga iyo Ryuuji kuwaas oo bilaabay xiriirka iyaga oo ku heshiiyey inay midba midka kale ka caawiyaan halkaas danaha kale ee jacaylka gaarka ah. Ma bilaabi doonaan in ay is jeclaadaan in kastoo? Hadda waxa jira dub Ingiriisi iyo sidoo kale Ingiriisi, Isbaanish iyo Boortaqiis reer Brazil ah.
3. Teasing Master Takagi-san (1 Xili, 12 Qaybood)
Waxaa si joogto ah ugu majaajilooday saaxiibkii ay isku fasalka ahaayeen ee Takagi-san, dugsiga dhexe ee Nishikata waxa ay ku dhaaratay in ay dib u soo celinayso iyada oo isku dayaysa (oo ay ku guuldarraysatay) iyada oo ay siinayso qaddar daawadeeda ah. Tani waxay u muuqataa anime aad caan u ah oo ku saabsan Netflix oo leh Isbaanish Yurub, Faransiis, Jabbaan, Boortaqiis Brazil iyo Ingiriisi, iyo sidoo kale sharraxaadda maqalka ee Jabbaan. Waxa kale oo jira Ingiriis, Faransiis, Boolish iyo qoraal-hoosaadyo Jabbaan ah. Sababaha qaar kaliya xilli labaad ayaa laga heli karaa Netflix. Tani waxay u badan tahay sababtoo ah liisankooda ayaa ka dhamaaday xilli ciyaareedkii ugu horeeyay markaa haddii aad rabto inaad daawato xilli ciyaareedka ugu horeeya waa inaad daawataa meel kale.
2. Kaliya shalay (1saac 59m)
Haweeney shaqo aan la qabin Taeko Okajima (Miki Imai) waxay safarkeedii ugu horreysay ku qaadaa meel ka baxsan waddankeeda Tokyo marka ay u safarto miyiga Yamagata si ay u soo booqato qoyska walaasheed inta lagu jiro goosashada saffflower ee sannadlaha ah. Taeko markay saaran tahay tareenka, waxay ku riyooto riyo maalmeedkeeda ku saabsan nafteeda ka hor inta aanay qaan-gaadhin. Iyadoo fasaxeeda uu sii socdo, waxay kordhisay dib-u-eegis ku saabsan niyad-jabka iyo raaxaysiga yar ee carruurnimadeeda, waxayna la yaaban tahay haddii nolosheeda qaangaarka ah ee ka buuxsamay walaaca ay tahay waxa Taeko da'da yar ay nafteeda rabto.
1. Gabdhaha bilaha ah - Nozaki-kun
Hablaha bilaha ah Nozaki-kun
Waxaan dhihi karnaa Gabdhaha Billaha ah Nozaki-kun waa taxanaha ugu badan ee taxanaha anime-ka nolosha ee Netflix oo diyaar ah in la daawado. Sakura iyo Nozukai waxay la kulmeen saaxiibkii Mikoshiba Kashima, oo ah gabar caan ah. Dhanka kale, Sakura waxa ay isku daydaa in ay ogaato aqoonsiga fannaanka soo jireenka ah ee manga, oo ay aad u xiisaynayso Inta Manga-ga caanka ah la soo saarayo, Sakura waxa ay isku daydaa in ay ogaato cidda fannaanka soo jireenka ah iyada oo u muuqata in ay la dhacsan tahay iyo qofka abuuray. halkan hadda waa 1 xilli oo leh 12 qaybood. Waxa kale oo jira dub Isbaanish ah, Boortaqiis reer Brazil ah oo dub Ingiriisi ah iyo dabcan maqalka asalka ah ee Jabbaan. Waxa kale oo jira af-hoosaadyo-hoosaadka reer Brazil, Isbaanish iyo Ingiriisi.
Waad ku mahadsan tahay akhrinta waxaad akhrin kartaa maqaalladayada kale ee la midka ah ee hoose oo fiiri dukaankayaga halkan.
Tags: aniimenetflix ururinta animenetflix animesliceoflife animetowatchonnetflix goodanimeonnetflix sliceoflifeanime sliceoflifeanimeonnetflix sliceoflifetowatchonnetflix top10animetowatchonnetflix top10sliceoflifeanimeonnetflix topanimetowatchonnetflix topliceoflifeanime topsliceoflifeanimetowatchonnetflix
Gelitaan Hore Astaanta Astaamaha - Alex Bennedeto
Gelitaanka Xiga Lori Kitahara - Astaanta Astaamaha